မလေးရှားနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ မလေးရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများမလေးရှားရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအနေဖြင့်မလေးရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ , မလေးရှားနိုင်ငံတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မလေးရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မလေးရှားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မလေးရှားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မလေးရှားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မလေးရှားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရွှေဗီဇာ၊ မလေးရှားနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ မလေးရှားနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောရွှေဗီဇာ၊ မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
ထပ်မံပံ့ပိုးမှုဖြင့်မလေးရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်မလေးရှားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 135,000
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မလေးရှားသည်အဓိကအားဖြင့်၎င်းသည်ဝေးကွာသောလုပ်ငန်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ဆက်လက်တည်ရှိနေစဉ်အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်များစွာသောဘုံအခြေအနေများနှင့်အတူအလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးလူနေမှုစရိတ်မှာများသောအားဖြင့်နည်းပါးသည်။ မလေးရှားတွင်ကောင်းမွန်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုရုံးများရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းများသည်ကလေးငယ်များနှင့်သင်အခြေချရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ မလေးရှားသည်ဖန်တီးထားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သဖြင့်ပြောင်းရွေ့မှုအပေါ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်မှာမလွယ်ကူပါ။
အလားတူမလေးရှားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်မလာသည့်လူများစွာလည်းရှိသည်။ သူတို့သည်ဤကြီးမြတ်သောနိုင်ငံတွင်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လာကြသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာမလေးရှားမှာဒုတိယအိမ်ဝယ်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ Malaysia My Second Home (MM2H) အစီအစဉ်မှာပါ ၀ င်ပါတယ်။ အချို့သည်မလေးရှားတွင်နှစ်စဉ်လအနည်းငယ်အနားယူရပြီးလေထုသည်အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သောကြောင့်ပုံမှန်အေးမြသောဥရောပရာသီဥတုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ သာယာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အစားအစာ၊ ရေ၊ တည်းခိုခန်းနှင့်သာယာဝပြောရေးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအတွက်စွမ်းရည်သည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုကိုတိုင်းတာရန်ထူးခြားသည့်အချက်အလက်များဖန်တီးထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘဏ္investigာရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဂျီဒီပီကိုသုံးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဂျီဒီပီပိုမိုမြင့်မားလေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုပိုမိုမြင့်မားလေလေဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်ရေစိတ်ကျေနပ်မှုတိုင်းတာမှုများသည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ဂျီဒီပီကို ၀ င်ခွင့်အတွက်ကန့်သတ်ထားရုံမျှမက၊ ဥပမာအားဖြင့်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်၊ တည်းခိုရန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်လက်ထောက်ပိုင်ဆိုင်မှုများပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ပါ ၀ င်သည်။
နံပါတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရမလေးရှားသည်နေထိုင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏အကျိုးဆက်များသည်တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းနေခြင်း၊ အစားအသောက်ကုန်ကျစရိတ်၊ အသွားအလာ၊ လတစ်လ ၀ င်ငွေ၊ သဘာဝအရည်အသွေးနှင့်အခွန်ကောက်ခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးမှရရှိသည်။ စျေးကွက်လေ့လာသုံးသပ်သူများကဤအစိတ်အပိုင်းများသည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရာတွင်အခြေခံကျသည်ကိုလက်ခံသည် ဤအစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲသူတို့၏ဘ ၀ တွင်မည်မျှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်ကို ဦး တည်သည့်အမျိုးမျိုးသောအမှတ်အသားများဖြစ်သည်။ အရေးမကြီးသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူနေထိုင်ရန်ပွင့်လင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်မလေးရှားနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံသည်။
တစ်ကိုယ်ရေစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နေစဉ်နိုင်ငံများအားပြသသည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူရန်နှင့်ဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်မြို့ပြဒေသများသည်သတင်းအချက်အလက်ကောက်ယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်သည်။ မြို့ပြ၏အာရုံစူးစိုက်မှုလူ ဦး ရေမြင့်မားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပိုပြီးအတိအကျရလဒ်များကိုပေးပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏မြို့တော်ကွာလာလမ်ပူသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှုအဓိကအချက်များတွင်ကောင်းစွာနေရာယူထားသည်။ ကွာလာလမ်ပူသည်အမေရိကန်မြို့ပြဒေသများဖြစ်သောဥပမာဆန်ဖရန်စစ္စကိုထက်အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပျှမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ ကွာလာလမ်ပူ၏တစ်နေ့ချင်းနေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ ၅၇ ရာနှုန်းနှင့်ညီမျှသည်။ Teleport မှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကွာလာလမ်ပူသည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှု၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်လစ်ဘရယ်အပန်းဖြေခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကြောင့်အသက်သွေးကြောအဆင့်မြင့်မားသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
အနည်းငယ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကမလေးရှားနိုင်ငံ၏မြို့တော်တွင်တည်းခိုရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာအတန်အသင့်ကြီးမားပြီးကြီးမားသောနည်းလမ်းကိုသတိပြုမိစေသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကွာလာလမ်ပူမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ်းလှမ်းမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုလူအများကလက်ခံနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤအခြေအနေသည်အခြေအနေမဟုတ်ပါ၊ စုစုပေါင်းစာမေးပွဲများအရမလေးရှားနိုင်ငံသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့်နေထိုင်မှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဘ ၀ အခြေအနေကိုဆိုလိုသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေအပြီးတွင်လိုအပ်ချက်အဆင့်ကိုလျှော့ချခဲ့သည့်အတွက်ချီးကျူးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မလေးရှားလူ ဦး ရေ၏ ၁% မျှသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပြမျဉ်းအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤတိုးတက်မှုသည်ဘဝ၏သဘောသဘာဝသိသိသာသာတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။
မလေးရှားတွင်လူ ဦး ရေသန်း ၃၀ ခန့်နေထိုင်သည်။ မလေးရှား၏အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကျိုးနွံမှုနှင့်အလယ်အလတ်ရှိမှုအတွက်ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ ဤအချက်ကနေထိုင်သူများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရိုးရိုး ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်၊ ဥပမာ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်လက်ထောက်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကိုမလေးရှားရှိစျေးဝယ်စင်တာများကသိသိသာသာထင်ရှားစွာတွေ့ရသည်မှာကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအလွန်အမင်းနိမ့်ကျသောစျေးနှုန်းများဖြင့်လျောက်ပတ်စွာလှပစေသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးခြင်းကစီးပွားရေးအခြေအနေသည်အပြုသဘောဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်အတင်းအကျပ်ခွန်ကောက်ခံသည့်ပမာဏသည်အမှန်ပင်နိမ့်သည်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းများအားကုန်ပစ္စည်းများကိုအမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချခွင့်ပြုသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ မှသတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရမလေးရှားသည်အဆင့် ၃၈ တွင်ရှိသည်။ မလေးရှားတွင်အလယ်အလတ်အဆင့်ရမှတ် ၉.၂ ရှိပြီး ၁၀ ခုတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ယင်းသည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုအခြေခံသည့်ဘဝတွင်ပထမတန်းစားဘဝဖြစ်သည်။
မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ မေလးရွား
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
အဘယ်ကြောင့်မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
မလေးရှားသည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆယ်စုနှစ်ချီနိုင်ငံရေးခိုင်မာမှုတို့မှအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ခရီးသွား is ည့်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေနှင့်မိုးသစ်တောများကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမျိုးစုကွဲပြားမှုသည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်နေထိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများအတွက်မလေးရှား၏ရွှေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်သည်အတော်လေးကျိုးနွံစွာဘဏ်အပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။
အစီအစဉ်တွင်အဓိကလျှောက်ထားသူကိုသူတို့၏လျှောက်လွှာတွင်သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မှီခိုနေသောကလေး ၂၁ နှစ်အောက်ကလေးများကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည်။ အပိုငွေသွင်းစရာမလိုပါဘူး
Residency မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
ရွှေနိုင်ငံသားပြုမှုအစီအစဉ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကို ၁၀ နှစ်ကြာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိုပေးသည်။ သတ်မှတ်စံနှုန်းများမှာရှုပ်ထွေးပြီးမလေးရှားဘဏ်တွင်ငွေပမာဏကိုသွင်းပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားနှင့်နှစ်စဉ် ၀ င်ငွေကိုပေးရမည်။ ကျန်းမာရေးအာမခံကိုလည်းဝယ်ယူပြီးအခြေခံကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။
အသက် ၅၀ နှစ်အောက်လျှောက်ထားသူများအတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၃၅၀၀၀ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားနှင့် ၀ င်ငွေအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ရရှိရန်အထောက်အထားများကိုတင်ပြရမည်။ ခွင့်ပြုချက်အရသင်သည်ဘဏ်အပ်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀,၀၀၀ သွင်းရမည်။ ၁ နှစ်ကြာပြီးနောက်သင်နေအိမ်၊ ပညာရေးသို့မဟုတ်ဆေးဝါးကုသမှုများကို ၀ ယ်ရန်အတွက်ငွေပမာဏ၏ထက်ဝက်ကိုသင်သုံးစွဲနိုင်ပြီးကျန်နေထိုင်မှု၏တစ်သက်တာအတွက်သင်ကျန်တစ်ဝက်ကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်။
အသက် ၅၀ ကျော်သူများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၅၀၀၀ နှင့်လစဉ် ၀ င်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ လိုအပ်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးပါကသင်သည်မလေးရှားဘဏ်သို့ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ငွေပမာဏ၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုတစ်နှစ်အကြာတွင်အိမ်၊ ပညာရေးသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ၀ ယ်ရန်သုံးစွဲနိုင်ပြီးကျန်ငွေကိုကျန်ရှိသည့်နေအိမ်သို့မပြီးမချင်းထားရမည်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များအားဖြင့် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ မလေးရှားဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်မလေးရှားရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုမလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့မှု၊ မလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်မလေးရှားမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားရုံသာမကမလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားနိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည်။ မလေးရှားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ မလေးရှားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ငါတို့တတ်နိုင်တဆင့်မလေးရှားဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ မလေးရှားအတွက်မလေးရှားအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ၊ မလေးရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
မလေးရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ ခုသို့မလေးရှားနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့မလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
မလေးရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
မလေးရှားမှ ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
မလေးရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
မလေးရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
မလေးရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မလေးရှားရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်မလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့နေထိုင်ရာအတွက်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာသွားမည်ကိုရှုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မလေးရှားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးမလေးရှားရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်မလေးရှားနေထိုင်ခွင့်
မလေးရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ မလေးရှားသို့မဟုတ်မလေးရှားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုမလေးရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံရန် Diligence ကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူမလေးရှားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများကိုဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်သလက်တီကိုမလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်မလေးရှားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အထောက်အထားများတင်ပြပြီးပါကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
မလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်မလေးရှားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားမလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်မလေးရှားမှလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် မလေးရှားရှိနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်မလေးရှားရှိသို့မဟုတ်မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံအားဖြင့် မလေးရှားရှိမည်သည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မဆိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် မလေးရှားဘို့ မလေးရှားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မလေးရှားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ခြင်း၊ မလေးရှားတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်နေသောမလေးရှားနိုင်ငံရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအားမလေးရှားကိုအထောက်အပံ့မပေးနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် မလေးရှားဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု မလေးရှားဘို့ မလေးရှားရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မေလးရွား မလေးရှားရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားအတွက်ရှေ့ရပျ မလေးရှားနိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်မလေးရှားနှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းမလေးရှားအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်မလေးရှား၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်တို့ဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်မလေးရှားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုမလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေသည့်မလေးရှားနိုင်ငံတွင် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောမလေးရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်မလေးရှားအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏နေထိုင်ခွင့်မလေးရှားမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်မလေးရှားစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Residency တွင်မလေးရှားအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ မလေးရှားသို့သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်၎င်းတို့၏အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံရှိဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ မလေးရှားဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မလေးရှားနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်မလေးရှားတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency မှလွဲ၍ မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးမှုများမှလည်းမလေးရှားတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ မလေးရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်နေရာတည်း၌ဆိုင်ဖွင့်ရန်မလေးရှားအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်မတွေ့ရပါ။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမလေးရှားနိုင်ငံ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်မလေးရှားနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လမ်းကိုထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ မလေးရှားမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (မလေးရှားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
မလေးရှားသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် မလေးရှားရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် မလေးရှားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်များနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, မလေးရှားအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် မလေးရှားနိုင်ငံရှိဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ မလေးရှားရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် မလေးရှားကမင်းစီစဉ်မယ်ဆိုရင် မလေးရှားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် မလေးရှားမှာလက်ငင်းစတင်ဖို့။
မလေးရှားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ မလေးရှားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် မလေးရှားမှာနေရာလွတ် အခမဲ့ဖြစ်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ မလေးရှားများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
မလေးရှားနိုင်ငံရှိဘဏ္Plာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
စာရင်းကိုင်, မလေးရှားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
မလေးရှားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ပြုပြီးနောက် အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မေလးရွား.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုမလေးရှားနိုင်ငံတွင်ပေးပါသည်
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် Web Design
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ App Development
မလေးရှားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မလေးရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မလေးရှားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်မလေးရှားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ မလေးရှားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မလေးရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်မလေးရှားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာအတည်ပြုပြီးသည်။
မလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများက Residency မှမလေးရှားအတွက်ရှေ့နေသည်သင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မလေးရှားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကမလေးရှားပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုမလေးရှားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ဒလင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - မလေးရှားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်မလေးရှား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကို `မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း 'ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ မလေးရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မလေးရှားမှာ
မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် မလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | မလေးရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်မလေးရှားစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်မလေးရှားစီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလျှောက်ထားပါ။ အကောင်းဆုံးမှာမလေးရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်မလေးရှားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
မလေးရှားအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ မလေးရှားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | မလေးရှားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှေ့နေများ မလေးရှားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ မလေးရှားအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | မလေးရှားအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုမလေးရှား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ရရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မလေးရှားသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ မလေးရှားရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မလေးရှားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်မလေးရှားစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ မလေးရှားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ မလေးရှားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ မလေးရှားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မလေးရှားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မလေးရှားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မလေးရှားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မလေးရှားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
မလေးရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
မလေးရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မလေးရှားမှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်မလေးရှားမှကိုယ်စားလှယ်များသည်မလေးရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ မလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးပြီး၊ Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှမလေးရှားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှမလေးရှားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှမလေးရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှမလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှမလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု မလေးရှားဘို့
မလေးရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency တွင်အရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး / စက်မှုကုန်သည်များအသင်း
Johor ၏တရားဝင်အစိုးရ ၀ ဘ်ဆိုဒ် https://www.johor.gov.my
မလေးရှားအထွေထွေအာမခံအသင်း (PIAM)“ PIAM ၏ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှု
ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစင်တာ (JSIC) - https://www.jsic.com.my
ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအခွန် - GST
အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏ Institution မှ
မလေးရှားအာမခံနှင့် Takaful ပွဲစားများအသင်း (MITBA)
မရိန်းဌာနကျွန်းဆွယ်မလေးရှား - https://www.marine.gov.my
Chartered အာမခံ Institute (CII)
Johor- ခရီးသွားလုပ်ငန်း https://www.johortourism.com
ISM ၀ ဘ်ဆိုဒ်
link ကိုမှ မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန မလေးရှားတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်